China AT Series Pneumatic Actuator fekitori uye vagadziri | Convista
Inoshanda svikiro: Yakaoma kana yakakanganiswa mweya, iwo asiri-anokanganisa magasi kana mafuta
2.Mhepo yekumanikidza kumanikidza: Kaviri kuita: 2 ~ 8Bar; Kudzoka kwechirimo: 2 ~ 8Bar
3. Kushanda kwekushanda:
Yakajairwa (-20 ℃ ~ 80 ℃)
Tembiricha yakadzika (Kusvikira -40 ℃)
Kupisa kwakanyanya (Kusvika ku150 ℃)
4. Kugadziriswa kwekufamba: Iva nekugadzirisa huwandu hwe ± 4 ° kuitira kutenderera pa 90 °
5.Lubrication: Ese anofamba zvikamu akafukidzwa nemafuta, achiwedzera hupenyu hwavo hwebasa
6. Kushanda: Zvingave zvemukati kana zvekunze
7. Max Kushanda Pressure: isingasviki 8Bar
1. Yedu yese pneumatic actuator inoratidzira NAMUR kukwirisa kuti isangane nematanho epasi rese uye inobvumidza kuiswa kuri nyore kwemuganho switch, masimisheni uye zvimwe zvekushandisa.
2. Iyo pinion yakakwira-chaiyo uye inosanganisa, yakagadzirwa fomu nickeled-alloy simbi, izere inoenderana neyazvino zviyero zveIO5211, DIN3337, NAMUR, Zvakare ukuru uye zvinhu zvinogona kugadzirwa zvakagadziriswa.
3. Zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana, iyo extruded aluminium alloy ASTM6005 Muviri unogona kurapwa neakaomeswa anodized, simba polyester rakapendwa (akasiyana mavara anowanikwa senge bhuruu, orenji, yero nezvimwewo), PTFE kana Nickel yakafukidzwa.
4. Die-cast aluminium alloy, iyo yepamusoro inogona kusaswa nesimbi yesimbi, PTFE kana nickel-yakafukidzwa.
5. Mapatya mapani mapistoni anogadzirwa fomu Kufa-kukanda aluminium inorapwa neHard anodized kana kugadzirwa fomu Cast simbi ine galvanization. Symmetric yekumisikidza chinzvimbo, hwakareba kutenderera hupenyu uye nekukurumidza kushanda, kudzosera kutenderera nekungochinjisa iwo mapistoni.
6. Iwo mairi akazvimirira ekunze ekumira ekumisa mabhaudhi anogona kugadzirisa ± 5 ° pane ese akavhurika uye ekuvhara nzira nyore uye chaizvo.
7. Zvitoro zvepamberi zvakafukidzwa zvinogadzirwa zvemhando yepamusoro yezvinhu zvinodzivirira ngura uye hupenyu hwakareba hwebasa, hunogona kushorwa zvakachengeteka uye zviri nyore kugutsa zvinodiwa zvakasiyana zve torque nekuchinja huwandu hwematsime.
8.Slideways inogadzirwa nemidziyo ine yakaderera kukakavara coefficient kudzivirira simbi kune simbi kusangana.
Pashure: DRG Series Heavy-Duty Pneumatic Actuator
Zvadaro: T mhando firita
Yakavharwa chitubu yakatakurwa yakazara yakazara mhando yekuchengetedza vharuvhu